Ukufuduka kwe-Motorola | Kusuka kuLinux
I-Motorola Migration uhlelo lokusebenza olukuvumela ukuthi udlulisele amafayela akho kwamanye amamodeli we-Motorola.
Akungabazeki ukuthi enye yezingqinamba ezinkulu lapho kushintshwa iselula kufanele idlulise wonke amafayela, lokhu kungaba ngumsebenzi odla isikhathi, kepha ngenxa ye-Motorola lokhu kungenziwa ngokushesha, kunjalo, inqobo nje uma indawo okuya kuyo Amafayela yi-Moto E, i-Moto G, i-Moto X, i-Droid Maxx, i-Droid Mini, noma i-Droid Ultra.
La uhlelo lokusebenza lokufuduka Kulula kakhulu ukuyisebenzisa, vele ulande uhlelo lokusebenza kuselula esifuna ukukhipha kuyo amafayela, kufanele futhi sibe nalo lapho uya khona, lapho-ke kufanele sikhethe ukukhetha ukuthumela amafayela, bese ikhodi izovela esikrinini seselula Sifuna ukususa amafayela, le khodi kufanele iskenwe kusuka ekusetshenzisweni kweselula etholwayo, uma lokhu sekuqedile, amafayela azoqala ukudluliswa ngokuzenzekelayo.
Uma iselula yakho endala iyi-iPhone, ungadlulisa futhi amafayela akho ngalolu hlelo lokusebenza, kufanele ukhethe inketho ye-iCloud bese ulandela imiyalo.
Ukufuduka yi-Motorola uhlelo lokusebenza olusemthethweni futhi ingalandwa mahhala ku-Google Play,
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Ukufuduka kwe-Motorola